Faalo: Goormaan Amxaaro walaalownay? – Gedo Times
17th April 2016 admin Wararka Maanta 6
Waxa ay sheegaan in uu dhamaaday xilaafkii u dhaxeeyey labada dal. Hadaba su’aasha meesha taalaa, oo aan isweydiinayo waxa weeye: Goormaan Amxaaro walaalownay inteense ku walaalownay?
Sida aanu ognahay Anaga iyo Amxaaro waxaa na dhextaalo colaad gaamurtay, taas oo salka ku hayso arimo badan oo ay ka mid yihiin isbalaarin iyo isa sheegasho ka imaaneysa dhanka Xabashida ilaa maantana socota, Waxa ayna isbalaarintaasi ugu danbeyntii keentay in labada Umadood ay isaga horyimaadaan dagaalo badan, kuwaas oo aan ka xusi karno dagaaladii dhexmaray Axmed Gurey iyo Xabashaddii waagiisii nooleyd.
Waxaa sidoo kale ka mid ah dagaalada dhexmaray labada Umadood dagaalkii Barakaysnaa ee 77, Kaas oo ay hormuudka u ahayd Dowladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barrre ee lagaga gol lahaa xureynta dhulka Soomaali Galbeed.
Umadda Soomaalida, ayaa dagaalkaasi u gashay sidii ay u soo ceshan lahad dhulkii laga haystay ilaa maantana laga haysto. Waxaana dagaaladaasi ku shahiiday Kumanaan wiil oo Soomaaliyeed halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale.
Dagaalkaasi ka dib, Waxa ay Xabashidu go’aansatay, Iyadoo kaashaneysa dalal ay jaal yihiin in la burburiyo dowladnimada Soomaalida, si aysan mar danbe u dhicin in uu duulaan danbe kaga yimaado dhanka Jamhuuriyadda Soomaalida.taas oo ay ugu danbeyntii ku guulaysatay ka dib markii ay isticmaashay Jabhado Soomaali ah, kuwaas oo jilbaha u dhigay Qarankii xoogga badnaa.
Laga bilaabo maalintii Xabasho dhulkaasi la siiyey ilaa maanta ma jirto meel ay Labada Umadood uga heshiiyeen sida laga yeelayo dulka iyo dadka maqan, haddii Iyada la siinayo iyo haddii ay soo celineyso intuba. Hadaba su’aasha meesha taalaa waxaa weeye kuwan ku hayo walaalaheena Itoobiya xagey warkaan ka keeneen, xageese lagu walaalowbay ? Mase noo sheegi karaa isbadalka dhacay ee keenay in la walaaloobo?
Midda kale, yaa wali arkay siyaasiyiinta Xabashida oo ku hadaaqayo walaalaheena Soomaaliyeed iyo waan ka heshiinay wixii dhacay? Kolay Anigu ma arag mana maqal, Waxaanse hubaa in ay Xabashi ku howlan tahay burburinta waxa haray ka dibna ay si toos ah u shaacin doonto damaceeda ku aadan dhulkan. Yaa dabada ka riixayo nidaamkan federaalka ah? Yaase hurinayo colaadan ka aloosan gobolada qaar? Yaad u malayneysaan in uu u been sheegayo Soomaaliland ? Yaa mar walba Adis Ababa uga yeero atoorayaasha Maamul Goboleedyada? dhamaan Jawaabaha su’aalahani waxaa soo wada waqtiga ee yaan la dhararin.
Daawo:Qaabkii ay udhacday Doorashadii Gudoomiyaha Barlaamka Galgaduud sare Caabudwaaq